I-Mankeel factory - i-Shenzhen Manke Technology Co., Ltd.
Wonke umsebenzi wethu we-excelsior ungowakho ungathola imikhiqizo yekhwalithi engcono kakhulu ye-Mankeel electric scooter.
Sihlala silawula yonke inqubo yomkhiqizo ngesistimu yokuphatha yesayensi. Futhi ulandele ngokuqinile indinganiso yamazwe ngamazwe yokukhiqiza ephelele kanye nesistimu yokuphatha ikhwalithi. Sinezisekelo ezimbili zokukhiqiza ezinendawo ephelele engaphezu kuka-13,000 wamamitha-skwele, afakwe imigqa yokukhiqiza yesimanje ezenzakalelayo noma e-semi-automated kanye nesethi egcwele yemishini yokucubungula inqubo. Kusukela ekwakhiweni komkhiqizo, ukucutshungulwa kwemishini, ukuhlanganisa izingxenye, ukuhlanganisa kuya ekuhlolweni, ukupakishwa, ezokuthutha kanye nesitoko, sinezisebenzi ezinolwazi ukuze siqinisekise ukuthi zonke izixhumanisi zenziwa ngokuhambisana ngokuqinile nezidingo zezindinganiso zamazwe ngamazwe ezihambisanayo.
I-CE, i-FCC, i-RoHS, i-UL yizindinganiso eziyisisekelo esizilandelayo. Ngalesi sisekelo, imikhiqizo yethu iphinde yaphumelela ekuhlolweni okuqinile njenge-TUV namanye amazinga aphezulu ahlobene. Ukuphishekela ikhwalithi ephelele kuyisisekelo sefilosofi yethu yebhizinisi. Kusukela ekukhethweni kwezinto zokusetshenziswa kuye kokwenziwa ngobungcweti nangokucophelela, kuya ekuhlolweni okunembile kwemikhiqizo eqediwe, yonke imininingwane ikhonjiswa ngokugcwele. Ukuhlola kwethu amasampula kwenziwa ngokuhambisana ngokuqinile nezinga lesampula le-AQL lamazwe ngamazwe. Ngaphezu kwalokho, izesekeli eziningi zemikhiqizo yethu zingeniswa emikhiqizo eyaziwayo emazweni aphesheya kwezilwandle. Ukwenza wonke umkhiqizo uphelele kususelwa ekwakhiweni kwethu okucophelelayo, okumboza ukubukeka okuthambile, ubuntu kakhudlwana, ukuze siqinisekise ukuthi isikuta sethu sikagesi ngasinye sifika ezandleni zabathengi sisezingeni eliphezulu futhi asinasici.
Sigxile ekuthuthukisweni kwezikuta zikagesi ezisezingeni eliphezulu, ezisebenza kahle kakhulu. Isikuta sikagesi sohlobo lwe-Mankeel sokuqala esizithuthukisile saklanywa ithimba le-Porsche ukuklama ukubukeka kwesikuta sikagesi, kanti isikuta sikagesi sesibili saklanywa futhi sakhiqizwa ngokuhambisana ngokuqinile nezindinganiso zokuphepha zaseJalimane. Ukubukeka kobuhle nokusebenza okusebenzayo kwezikuta zikagesi yilokho esigxila kukho emsebenzini wethu we-R&D, Okwamanje, kokubili ikhwalithi nokuphepha kuyizinto eziza kuqala kithi ekuthuthukisweni komkhiqizo. Uma kucatshangelwa ukubukeka, ukunethezeka kokugibela, ukuphepha kanye nekhwalithi kokukodwa, ezinye izikuta zethu zikagesi ezakhiwe futhi zakhangiswa nazo ziye zasebenzisa lo mqondo kusukela ekuqaleni.
Imishini yethu yokuhlola kanye nenqubo
Ukuhlola esikwenzile ukuze siqinisekise izinga eliphezulu lemikhiqizo yethu kufaka phakathi kodwa akukhawulelwe kulokhu: ukuhlolwa kwesifunda esifushane, ukuhlolwa kwamandla emoto, ukuhlolwa kwesifutho sikasawoti, ukuhlolwa kwezinga lokushisa eliphezulu neliphansi. ukuhlolwa kwezinga lokushisa, ukuhlolwa kokukhathala kwemoto, ukuhlolwa kokusebenza kwamabhuleki, ukuhlolwa kokuhluleka kwemoto yonke, ukuhlolwa kokudlidliza kwemvamisa ephezulu, ukuhlolwa kokumelana nomphumela), ukuhlolwa kokudlidliza, ukuhlolwa kwamandla okugoba intambo (ukuhlolwa kwamandla okugoba izintambo), ukuhlolwa kokukhuphuka njll., ukuze kuqinisekiswe ukuthi bonke abasebenzisi be-Mankeel bangathola imikhiqizo yekhwalithi ephezulu, ephephile kanye nolwazi lokugibela olunethezeke kakhulu.
Inqubo yokulawula ukukhiqiza
Wonke amaphuzu aqinile ukukwazi ukukunikeza imikhiqizo nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kakhulu!